पीडामा परेकाहरू पेट भन्दा मन भर्न चाहन्छन्ःकोमल वली |
पीडामा परेकाहरू पेट भन्दा मन भर्न चाहन्छन्ःकोमल वली
प्रकाशित मिति :2015-06-05 12:01:44
जनताले मलाई भूगर्भवीदलाई जस्तै प्रश्न सोध्थे । काभ्रेकी एउटी आठ वर्षीया नानीले सोधिन् ‘यो कति वेरसम्म आउँछ आन्टी ? प्लिज भूकम्प आउन बन्द गराईदिनुस न ।’ गायिका तथा सञ्चारकर्मी वलिले भनिन् ‘यो सुनेपछि मन भारी भएर आयो । रेडियोमा बोल्दै थिएँ, मन खोलेर रुन पनि सकिनँ ।’ महिला खबर डटकमले वलीसँग गरेको कुराकानी ।
भूकम्प गएको दिन (वैशाख १२ गते) रेडियो नेपालमा कति घण्टा बोल्नु भो ?
वैशाख १२ गते बेलुका ६ देखि १३ गते विहान ७ बजेसम्म लगातार १३ घण्टा बोलीरहेँ ।
यतिलामो समय बोलीरहँदा थकाई लागेन ? कसरी चलाउनु भयो कार्यक्रम ?
बीच–बीचमा भूकम्प सम्बन्धि जानकारी दिएका थियौं । बिहानपख अलि आवाज सुके जस्तो भएको थियो ।
रातभर रेडियो नेपालबाट सबैलाई सान्त्वना दिईरहनुभयो । आफैलाई चाहिँ डर लागेन ?
पराकम्पनले समाचारवाचन कक्षको घडी हल्लँदा मुटुको ढुकढुकी बढ्थ्यो । आँखा बारम्बार भित्तामा झुिण्डएको घडीमा जान्थे । रेडियोमा बोलिरहँदा फेरि आयो है, आयो भनि रहेकी थिएँ । सायद तपाईले सुन्नुभयो होला । भूकम्पपछि पृथ्वी हल्लीरहने रैछ क्यारे जतिबेला पनि हल्लीरहेको महसुस हुथ्यो । डर लाग्थ्यो । तर, विपतको त्यो समयमा मैले डर भन्दा कर्तव्य ठूलो ठानेँ ।
कसरी चलाउनुभयो कार्यक्रम ?
विपतमा परेका जनताले फोनबाट मेरो आमालाई घरले थिचिराखेको छ । निकाल्न सकेको छैन । दिदी म के गरौैं ? उद्धारका लागि कोही आएको छैन । बिजुली छैन । फोनमा व्याट्री सकिन लाग्यो । विजुलीको मान्छेसँग कुरा गराईदिनुन्, प्लिज भनिरहेका थिए ।
त्यही दिन काभ्रेबाट एकजना ८/९ वर्षकी बहिनीको फोन आयो । उनले भनिन् ‘म, भाई, आमा र बुबा छौं । घर सबै भत्कियो । बाहिर बसेका छौं । पानी पर्न लागेको छ । भूकम्प आईरहेको छ । यो कति वेरसम्म आउँछ, आन्टी प्लिज भूकम्प आउन बन्द गराईदिनुन् ।’ ती बहिनीको नाम निशा हो ।
जसरी उनको आवाज सुनें, त्यसपछि भित्रैदेखि मन भारी भएर आयो । गला अवरुद्ध भयो । रेडियोमा बोल्दै थिएँ । मन खोलेर रुन पनि सकिन । निशालाई भने भोली विहान तिमीलाई लिन हेलिकप्टर आउँछ । नडराई आमाबाबुसँग बस्नु ल भन्दै उनलाई फोनबाट बिदा गरें । त्यसपछि मैले त्यहाँको नेपाली सेना, प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरें । नानीको आवाज रेडियो नेपालबाटै पटक–पटक सुनायौं । हाम्रो उद्देश्य सरकारी उद्धार टोली छिटो पुगोस् भन्ने थियो । विपतमा परेका जनताको कुरालाई जिल्लाको सम्बन्धित निकायसँग जोड्ने काम पनि ग-यौं । जसका कारण कैयौं दाजुभाई दिदी बहिनीको उद्धार पनि भएको छ ।
परिवार गुमाएका र घरभित्र छोराछोरी पुरिएकाहरूले अब हामी के गर्ने भन्दा तपाईसँग के जवाफ हुन्थ्यो ?
सान्त्वना दिने बाहेक केही थिएन । परिवारलाई केही नहोस् भनेर ईश्वरसँग प्राथना गरौं । संकटको बेला हो । तपाई खुल्ला ठाउँमा बस्नुहोला । भोली विहानसम्म उद्धार टोली आउँछ । यति मात्र भनिरह्याैं ।
अहिले तपाई पाल र विद्यालयमा गीत गाउँदै हिड्नुको उद्देश्य के नि ?
भूकम्पले घरवारविहिन भएकाहरूलाई राहत बाँड्न जाँदा पहिला राहत लिनुहुन्छ कि गीत सुन्नुहुन्छ भन्दा सबैले एकै स्वरमा भन्नुभयो गीत सुन्छौं । पीडा भुल्न चाहन्छन् मान्छेहरू । पेट भन्दा मन भर्न चाहन्छन् पीडामा परेकाहरू । दुई छाक खाएर मात्र पेट भरिन्न । पेटसँगै मुटुमा लागेको चोट पनि भरिनुपर्छ । मन भरिन जीवनमा खुशी र सन्तुष्टिको आवश्यकता पर्छ । कला, साहित्य र संगीतले नै खुशी र आत्मसन्तुष्टी दिन सक्छ । अर्को कुरा बालबच्चा भएको ठाउँमा महिला अवश्य आउनुहुन्छ । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य महिला र बालिकामाथि विपतको बेला हुनसक्ने हिंसाबाट सजग गराउनु हो ।
विद्यालयमा नि ?
बच्चालाई स्कुल जान मानसिक रुपले तयार गर्ने बेला हो यो । हरेक कुराको समय हुन्छ । त्यसैले अहिले म विद्यालयमा बोलाएको ठाउँमा पुगेकी छु । भूकम्पको डर मन मस्तिष्कबाट हटाउनका लागि मनोरञ्जनले ठूलो काम गर्छ । त्यही सोचेर म वैशाख १४ गते नै टुँडिखेलको पालमा रहेका बालबालिका र महिलाका माँझ पुगेकी थिएँ । उहाँहरू मसँगै आफ्नो दुःख भुल्ने कोसिस गरेको पाएँ ।
त्यहाँपनि मैले बालबालिकाको सुरक्षामा धेरै कुरा गरें । विपतको बेला आफ्नो आमाबुबासँगै बस्ने । अरुले दिएको नखाने, अभिभावलाई सोधेर मात्र बाहिर जाने, समयमा घर फर्कने कुरा गीतको माध्यमबाट पु-याएँ ।
म सिन्धुपाल्चोक गएँ । राहत भन्ने बित्तिकै बाबुआमाले बच्चाहरू अगाडी लगाउने । बच्चा तछाँड र मछाँड गर्दै आएको देखें ।
मैले सबै परिवार राखेर बच्चालाई अघि लगाएर राहत लिन नपठाउँन आग्रह गरें । मैले उहाँहरूलाई प्रश्न पनि गरें राहतको नाममा बालबालिकालाई कसैले ललाई फकाई गरेर लग्यो भने के गर्ने ? राहत आयो भन्दैमा बच्चाबच्ची माग्न पठाउने काम बन्द गर्नु भनेर सुझाएँ । धेरै अभिभावकले हुन्छ पनि भन्नुभयो ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला घुमिसके भन्नु भाे । तपाईको नजरमा पुननिर्माणको पहिलो प्राथमिकता के ?
भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै, परनिर्भर हुनुहुँदैन भन्ने सोचको विकास गराउनु अत्यावश्यक छ ।
राहत वितरण हेर्दा एक प्रकारको होडबाजी जस्तो देखिन्छ । यसलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?
सहयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । थोरै सहयोग गरेर राज्यलाई गाली गर्ने र सस्तो प्रचार बाजीलाई रोज्नु राम्रो होइन । यसले नकारात्मक सोचको विकास गर्छ । जुनकुरा भावी पुस्ताको विकासका लागि ठूलो घाटा हुन्छ ।
राहतको नाममा बिस्कुट र चाउचाउका पोका वितरण गरेर आफूले मात्र सेवा गरेको अहंकार मैले देखेकी छु । जुन ठिक होइन । यसले मानिसलाई परनिर्भर बनाउँछ । मागेर खाने संस्कारको विकास गर्छ । यस्ता कुरा बन्द गर्नुपर्छ । राज्य बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मा हो ।
पूर्व तयारी नभएको हुँदा सरकारको बढि अलोचना भएको होला नि ?
भूकम्प आउँदा कसरी जोगिने, के गर्ने भन्ने कुरा मैले पनि गीत मार्फत जनतामा पु-याए तर, हाम्रो देशका संरचनासँग मेल खाएन । राज्यले गर्ने तयारीमा चुक भएको छ । राहत भन्ने कुरा तत्काल दिने हो । शुरुमा भएन । अहिले पुगेको छ ।
भूकम्पको बेला मानिसलाई चाहिने अत्यावश्यक कुरा के के हुन ?
खानेपानी, बत्ती, सिठ्ठि, फोन, पैसा (एटिएम कार्ड) सबैलाई चाहिन्छ । महिलाले भने लगाउने लुगामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । कस्तो लुगा लगाउँदा आफूलाई घरबाट निस्कन सजिलो हुन्छ । भूइँचालो जुन बेला पनि आउँन सक्छ, त्यसकारण राती सुत्दा बाहिर निस्कन मिल्ने खालको लुगा लगाएर सुत्नुपर्छ । घर भत्केर तत्काल लुगा झिक्न र किन्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति २०७२ जेठ २२ गते शुक्रवार